Sina: Mendrika ny hahita masoandro mihiratra i Tian Xi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Septambra 2010 19:35 GMT
Tamin'ny 4 Septambra aho nahazo ity sary ity tamin'ny fitoraham-blaogy kiritika sina.
Ilay zazavavy dia mitàna baoritra ahitàna ny soratra hoe: Vonjeo dadatoa Tian Xi! Dadatoa Tian Xi tsy maintsy faly ianao! Ny “Xi” dia midika “hafaliana” amin'ny teny sinoa. Izany no fanantenan'ireo ray aman-drenin'i Tian mba hananany fiainan-tsambatra nefa nitondra azy tany amin'ny làlana mifanohitra amin'izany ny zava-misy.
I Tian Xi, 23 taona dia mararin'ny SIDA izay tratran'ny VIH tamin'ny taona 1996 rehefa namindrana rà tany amin'ny tobim-pitsaboana iray any amin'ny faritr'i Xincai, faritanin'i Henan. Nosamborin'ny manampahefana izy tamin'ny 17 Aogositra noho ny fanimbàna fanànan'olona ka nafindra tany amin'ny Tobim-pitazonana ireo voampanga tamin'ny 25 Aogositra.
Mba hamonjena an'i Tian Xi, ny rainy dia nihaona tamin'i Wang Keqin, mpanao gazety malaza sady mpitoraka blaogy izay nanampy ny rain'i Tian hanazava ny toerana nisy azy tamin'ilay tantara tao amin'ny blaoginy:
Tamin'ny 23 Jolay, Tian Xi izay nianatra tany Beijing, dia nahazo simaiso avy amin'ny Jia Guoyin, sekreteran'ny Antoko any amin'ny faritr'i Xincai, manao hoe: Amin'ny maha-mpianatry ny anjerimanontolo anao, fantatrao izay tokony atao hamahana ny olanao. Tongava any amin'ny biraoko amin'ny Alatsinainy.
Nilaza ny rain'i Tian: “Hatramin'izay enin-taona nanaovana fangatahana izay, fotoana voalohany izao nandefasan'ny sekreteran'ny antoko any amin'ny faritra simaiso ho an'i Tian. Nino izahay fa ho voavaha tanteraka ny olana. Nody avy hatrany i Tian taorian'ny nahazoany ilay simaiso”.
Ny Alatsinainy 26 Jolay, nankany amin'ny biraon'ny sekreteran'ny antoko i Tian nefa nilaza ireo tompon'andraikitra fa lasa nivory ny sekretera Jia. Nandefa simaiso tany amin'i Jia i Tian, izay nilaza taminy ny mba handalovany any amin'ny birao indray ny alatsinainy taorian'io.
Ny alatsinainy manaraka, 2 Aogositra, tonga tany amin'ny biraon'ny sekretera i Tian tamin'ny 8ora sy sasany maraina. Tsy nipoitra mihitsy anefa i Jia. Nanazava indray ireo tompon'andraikitra fa sahirana amin'ny fivoriana izy.
Noho ireo fanafody fanefitry ny SIDA azon'i Tian avy any Beijing efa ho lany, nanapa-kevitra ny haka fanafody any amin'ny tobim-pitsaboana any an-toerana izy, izay tompon'andraikitry ny fikarakaràna azy amin'ny aretiny.
Rehefa nandao ny tranobem-panjakàna tamin'ny 2 Aogositra i Tian Xi dia nankany amin'ny Tobim-pitsaboam-bahoaka voalohany any an-tanànan'i Xincai. Tao amin'io tobim-pitsaboana io no nahazoan'i Tian Xi ny VIH.
Nankany amin'ny biraon'ny lehibe, Li Junzhou, i Tian Xi nangataka fanafody sy famatsiam-bola. Nasain'i Li niresaka amin'ny mpitarika ny governemantan'ny faritra izy ary nandao ny birao.
Nilaza ny rain'i Tian: tezitra mafy i Tian Xi ary nanositosika ireo zavatra rehetra teo ambony latabatry ny lehiben'ny hopitaly hilatsaka amin'ny tany, anisan'izany ny solosaina, masinina fandefasana fax ary telefaonina. Taorian'izay dia voatombana ho 3000 RMB teo ho eo ny vidin'ireo zavatra simba.
Tamin'ny 5 sy 6 Aogositra, nankany amin'ny biraon'i Li indray i Tian Xi. Nandà ny hihaona aminy ankefa i Li ary nanidy tena tao amin'ny birao. “Noho ny hatezerany, nopotehan'i Tian Xi ny hidim-baravaran'ny lehiben'ny hopitaly”.
Ny 6 Aogositra tamin'ny 4ora tolak'andro, nosamborin'ny manam-pahefana any an-toerana tsy misy fanazavàna i Tian. Ny ampitson'io, nandefasana antontan-taratasy roa ny renin'i Tian manambara fa voatana mandritra ny 15 andro i Tian noho ny zavatra nataony tamin'ny lehiben'ny hopitaly. Ny andro manaraka io, naaton'ny manam-pahefana ny fitànana ary nalefa nody i Tian. Nefa eo ambany fanaraha-mason'ny manam-pahefàna kosa ny fianakaviany. Ny 17 Aogositra, nosamborin'ny manam-pahefàna indray i Tian, noho ny fanimbàna fanànan'olona kosa tamin'ity indray mitoraka ity. Nivoaka tamin'ny 22 Aogositra ny taratasy fisamborana azy.
Maro ireo mino fa firaisana tsikombakomba amelezana an'i Tian Xi izao fisamborana izao noho izy lasibatra voalohany amin'ny “fanaraha-maso ny filaminana”. Araka ny tatitry ny governemanta any an-toerana ho an'ny governemantan'ny faritra natao tamin'ny 9 Jolay, Tian Xi
dia tafiditra tao amina raharaha tsy ara-dalàna vao sy ela ary nanome fahasahiranana maro ho an'ny governemanta amin'ny fanaraha-maso ny filaminana. Torohevitra: Ilaina ny fandraisan'anjaran'ireo manam-pahefàna. Antontan-taratasy feno ilaina hahatratrarana azy.
Ireo Fikambanana tsy miankina sy ireo tambazotra, toy ny Love Knowledge Action sy ny China AIDS Group, dia nanao fanambaràna mitaky ny famotsorana an'i Tian Xi noho ny antony ara-mahaolombelona. Ireo mpahay lalàna momba ny zon'olombelona koa dia nanamarika fa ny fitànana dia rehefa misy fanimbàna fananan'olona mitentina maherin'ny 5000RMB ihany vao mihatra.
Teraka tamin'ny 3 Janoary 1987 i Tian Xi. Tamin'ny Martsa 1996 tamin'izy 9 taona, niharan'ny loza izy ary nanambara ny mpitsabo avy ao amin'ny Tobim-pitsaboam-bahoaka voalohany any amin'ny faritr'i Xincai fa misy fahasimbàna kely ny sain'i Tian ary nanolo-kevitra ny hamindrana rà izy hitsaboana izany. Nanomboka tamin'izay, niha-nalemy ny vatan'i Tian Xi. Ny 12 Jolay 2004, fantatr'i Tian Xi fa mitondra ny tsimok'aretina VIH izy tamin'ny alalan'ny fizahàn-drà ary nahazo fitsaboana maimaimpoana avy amin'ny tobim-pitsaboana any an-toerana.
Ny volana Septambra 2004, ny fianakavian'i Tian dia nanao fangatahana famatsiam-bola 1 tapitrisa FMB tamin'ny fitsaràna tany amin'ny faritra nefa notsipahana tsy misy fanazavàna izany. Nanomboka tamin'izay no nanombohan'izy ireo nametraka fangatahana tany Beijing. Tamin'ny 2005, tafiditra tany amin'ny anjerimanontolo tany Beijing i Tian ary lasa mafana fo amin'ny ady amin'ny SIDA. Nibilaogy momba ny fitakiana ny marina izy ao amin'ny TianXi sy ny HIV.